Sina mpanamboatra sy mpamatsy angovo fanary rà azo ampiasaina | Zhancheng
Ny fantsom-panandramana dia vita amin'ny fitaovana PE / PP / PS ambony, manana fifandanjana simika tsara izy io. Ampifanarahana amin'ny fitehirizana ny ankamaroan'ny solvent organika polar, asidra malemy, fototra malemy.
- Ny fantsom-pitsapana PS / PP dia amboarina miaraka amina teknika tena tsara, ny vokatra sasany dia mahazaka hafainganam-pandeha centrifuge hatramin'ny 4500 rpm tsy misy triatra na famoahana.
- Ny habe sy ny karazany marobe dia afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fitsapana.
- Ny labels dia azo ampanjifaina mifanaraka amin'ny tinady fanadinana manokana.
Namboarina tamin'ny fanangonana ary avy eo ny fisarahana ho an'ny gripa, Fluvom-borona, aretin-tongotra sy vava, kitrotro sns. Izy io koa dia ampifanarahana amin'ny fanangonana sy tranport ho an'ny Chlamydia, Mycoplasma ary Ureaplasma specimen. Manangona amin'ny ankapobeny ny santionany: anus sns.
1. fantsona fanangonana santionany:
Ny vatan'ny tubo sy ny satrony dia vita amin'ny Polypropylene, Tsy misy fivoarana aorian'ny HTHP (121 Celsius, 15 min), tsy misy fametahana ambany mari-pana ambany (-196 Celsius). Izy io dia afaka mitondra ny status extrusion ary ny fiatraikany mahery vaika. Ny famolavolana taper ambany dia mahatonga azy io ho centrifugation sy hozongozonina. Porofo mivoaka.
2. Rano fitahirizana santionany:
Araka ny fitsapana lehibe ny fiantraikan'ny sela eo amin'ny ranoka fototra, ny rafitra buffer, ny stabilizer ny proteinina, ny mpiaro ny hatsiaka, ny asidra amine, sns.
3. Fehin-tànana mifatotra:
Ny teknolojia nilona jet namboarina dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny fanangonana santionany avy amin'ilay marary amin'ny ambaratonga lehibe indrindra.
manatsara ny fahombiazan'ny fanangonana sy famoahana sela sy santionana misy rano.
Hatsarao ny fahatsapana ny fandalinana, tsy misy santionany sisa tavela ary afaka manafaingana ny fitsaboana ny santionany. Ny sticker PS dia mora tapaka. Namboarina tamin'ny vozon-tranonjaza, nasopharynx, lavaka am-bava, Rafitra forisika ahazoana ary fanangonana ADN sns.
4. Votoatin'ny vokatra:
1) Fanary ny nilona volon'osy nilatsaka na volon-kofehy vita amin'ny polyester, ampahany iray.
2) ranona 1-6m (tahan'ny fanadinana PCR ambony kokoa), vakana roa fitaratra.16 × 100mm fantsona fanangonana tombo-kase, singa iray.
3) Kitapo biosafety, singa iray.
4) Ny swab sy ny fantsom-panangonana dia fonosin'ny kitapo vita amin'ny plastika na kitapo blister, voaterin'ny taratra gamma.
5) 2 taona lany amin'ny maripana mahazatra.
Fantson-dra EDTA-K2 / K3
Glass / Plastika
Ampiasaina amin'ny klinika amin'ny fizahana ra matetika toy ny sela mena, sela fotsy, takelaka ary famakafakana sela isan-karazany
Angony ny rà amin'ny mari-pamantarana marika amin'ny vatan'ny fantsona raha ilaina izany. Aorian'ny fanangonana ra, avadika moramora ny fantsona fanangonana rà in-5-6 mba hifangaro tanteraka ireo zavatra ampiana sy ra.
Fantsom-bozary coagulant mampisaraka
Ampiasaina amin'ny klinika amin'ny biokimika, immune, serum ary fitsapana ara-pitsaboana hafa hahazoana santionana serum avo lenta
Angony ny rà amin'ny mari-pamantarana marika amin'ny vatan'ny fantsona raha ilaina izany. Aorian'ny fanangonana ra, avadika moramora ny fantsona fanangonana rà in-5 5-6 mba afangaro tsara ny coagulant sy ny santionan'ny rà, ary ampiasao aorian'ny fifangaroan'ny ra tanteraka.
Tsy misy fantsona fanampiny
Ampiasaina amin'ny andrana ara-pahasalamana biokimika serum, fiasan'ny aty, fiasan'ny voa, siramamy amin'ny ra, lipida amin'ny ra, proteinina serum ary famaritana anzima isan-karazany
Angony ny ra arakaraka ny haben'ny marika amin'ny vatan'ny fantsona, ary ampiasao aorian'ny fifangaroan'ny ra
Heparin Sodium / Tube Lithium
Ampiasaina amin'ny klinika amin'ny fitsapana biokimika vonjy taitra, fitsapana hemôglôbininà glycosylated ary fitiliana hemorheology
Sodium sitritra 9: 1
Ampiasaina amin'ny klinika mba hizaha toetra ny rafitra fampidiran-dra (PT, APTT, singa mifangaro)
Sodium sitritra 4: 1
Ampiasaina amin'ny klinika amin'ny famaritana ny tahan'ny sedimentation an'ny sela
Teo aloha: Kaopy santionany vita amin'ny plastika azo ampiasaina
Manaraka: Tube fantsom-pamantarana virus